Izalathiso zokwenza iprojekthi yoyilo yoyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izalathiso zokwenza iprojekthi ebonakalayo
UPablo Gondar | | Ukuphefumlelwa, Izibonelelo
Las izingqinisiso zokwenza iprojekthi ebonakalayo okanye naluphi na olunye uhlobo lweprojekthi lubalulekile ukufezekiswa umphumo osebenzayo, ngokufika kwe Internet Ihlabathi liphela elinemizobo kunye nolwazi lwengcingane luvulekile olunokusinceda ukuba sikhule iiprojekthi. Ukusuka kwiinethiwekhi zentlalo ukuya amaphepha akhethekileyo kubugcisa begraphic kunye nothungelwano loyilo, Internet Ngumlingane omkhulu ukwandisa ulwazi lwethu kwaye ube ngumlingani wethu.
Xa sithetha ngezalathiso sithetha ngokukopa, isalathiso asiyonto engaphaya koku fumana ulwazi ngesihloko esele sisonjululwe ngokomzobo ngaphambili ngenjongo yoku sebenza njengesikhuthazi Ukuphuhlisa iiprojekthi ezintsha. Ukuba sithatha izingqinisiso ezivela kwilogo malunga necandelo lolwandle, into esiyikhangelayo ayikokukopa loo logo kodwa kukubona ukuba bayisombulule njani imbono yokumela "ulwandle" ngokucacileyo: imibala, imilo, isimbo, njl. Umzekelo, ukuba sithatha njengereferensi ilogo ye Nike Siyabona ukuba imele isantya sekrele elisika umoya, ke ngoko sithatha ukuba umdlalo unxulumene nesantya. Siza kubona ezinye zezona ndawo zisetyenziswayo xa ujonge kwimizobo ebonakalayo.
Xa kufuneka yilwa nephepha elingenanto Kuyimfuneko ukuthambisa ubuchule kuyo zivuselele ingqondo yethue kwaye sivuse amandla ethu okuyila, kuba oku sineendlela ezininzi jonga kwizalathiso ezibonakalayo. Singazikhangela izingqinisiso ngendlela yesiqhelo: iimyuziyam, iincwadi, iimagazini ... njlnjl okanye sikwenze kwizibuko ezizodwa ukulungiselela le njongo. Ukusuka kwinethiwekhi yoluntu ukuya kumaphepha abekelwe kuphela isebe le ubuchule zisinika imibono engapheliyo yeeprojekthi ezizayo.
Masibone oku kulandelayo iimbekiselo ekubhekiswa kuzo:
Twilley (izingqinisiso zazo zonke iintlobo)
Behance (Inethiwekhi yoyilo lweAdobe)
Tumblr (ezentlalontle kunye namagcisa)
Elinye lala mazwe lisinika izingqinisiso kunye nokwenzeka kokwenza i akhawunti free kwaye ukwazi ukuhlala unolwazi ngemicimbi yegraphic.
Xa sikhangela izingqinisiso, sihlala sikwenza oko sikucinga kwangaphambili Iyintoni iprojekthi yethu? Yintoni endiyifunayo? Ngaba ikho into efanayo? Ukuzibuza imibuzo malunga nale nto siyifunayo kunokusinceda khangela izalathiso ngokufanelekileyoUmzekelo, ukukhangela iithegi yindlela elungileyo yokukhuthazwa yimicimbi enxulumene neprojekthi esinayo engqondweni. Masithi sinomdla wokwenza umzekeliso / i-montage / umsebenzi wegraphic esekwe kwi-surrealism, ukuze sibe nezalathiso ezaneleyo esinokukhangela ngegama elithi «surrealism» tag Kwi-portal Twilley (okanye nakweyiphi enye into) ngolu phando siza kufumana izingqinisiso ngokubanzi apho siza kufumana zonke iintlobo zeeprojekthi ngale tag, eyona nto ifanelekileyo kukukhangela amagcisa athile esiwabonileyo kolu phando lokuqala jikelele.
Ke ngoko, xa sikhangela kwimizobo ebonakalayo, eyona nto kufuneka siyenze ngale ndlela ilandelayo:
Okokuqala, ngokubanzi kufuneka ube khangela ngamagcisa amaninzi ukuba bayayichukumisa loo nto.
Isibini, kugxilwe kumzobi othile ukukhangela isitayile esinye.
Twilley ujika abe ngu ally enamandla njengoko inethiwekhi yentlalo evumela abasebenzisi ukuba benze ngokukhawuleza ibhodi (ialbham) enomxholo kwisihloko esithile, ngalo ndlela bahlala bekhathalogu yobuqu. Ukuba ufuna ezinye iintlobo zeefayile ezibonakalayo kunye nezixhobo unokukufunda oku post.
Khangela izingqinisiso kunye ujonge ukusikhuthaza ukubona ukuba basombulule njani Imixholo enemifanekiso kwiingqondo ezahlukeneyo yinto esinokuthi siyisombulule ngolu hlobo lwezibuko. Masithi sifuna ukwenza i-logo malunga nolwandle kwaye sifuna ukwazi ukuba bayisombulule njani le ngxaki ngaphambili, kuba into esinokuyenza kukubhala kuyo Twilley ileyibhile ethi "logo yelwandle" iya kusinika uninzi lweereferensi zeelogo ngalo mbandela onxulumene nolwandle kwaye uya kusinceda ukujonga ngcono umbono.
Khangela ngeendidi yinto ehlala isinceda kakhulu xa kufikwa ekufumaneni izingqinisiso malunga izihloko ezithileIqonga mzimzi Inenjini yokukhangela yeereferensi eza kusinceda ukukhangela umxholo othile.
Olunye uhlobo lwe khangela iimbekiselo kukwenza oku kwethu umhlobo omkhulu kaGoogle Ngophendlo jikelele lwesihloko, umzekelo ukuba sifuna ukwenza iprojekhthi ye-surreal esinokuyibhala kuGoogle: amagcisa e-surrealist, kamva siwabhala phantsi la magama kwaye sinokuwakhangela kwizibuko ezibonwe ngaphambili kule post.
Nokuba yeyiphi na iprojekthi yethu, sinezinto ezininzi esinokukhetha ukuzenza ukuze sikhuthaze iingqondo zethu xa sizikhangela izicwangciso zokudalaUkuthatha ithuba lamanethiwekhi yinto esingafanele siyiphose.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Izalathiso zokwenza iprojekthi ebonakalayo
Uyenza njani iProjekthi yokuHlela usebenzisa iiPhepha eziPhezulu kwi-Indesign
Buyisela ifoto yakudala nge-Photoshop